Android အတွက်အကောင်းဆုံး file manager များ Androidsis
Android သုံးစွဲသူအများစုသည်၎င်းတို့ထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်ဖိုင်များစွာသိမ်းဆည်းလေ့ရှိသည်။ ဒါကရုပ်ပုံများ၊ တေးဂီတ၊ ဗီဒီယိုသို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းများပင်ဖြစ်ဖြစ်။ ၎င်းသည်အလွန်အဆင်ပြေသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဤဖိုင်များအမြဲတမ်းရှိနေသည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့သည်များလွန်းနိုင်သည်။ အရမ်းများလွန်းတယ်, ဖုန်းမှာဘာရှိသလဲဆိုတာမသိဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရှာနေတာကိုရှာရတာခက်တယ်။ ဤကိစ္စများတွင်ဖိုင်မန်နေဂျာများဖြစ်နိုင်သောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ကြသည်။
ဤအပလီကေးရှင်းများအားကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာရာကိုအဆင်ပြေစွာစုစည်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဖိုင်များကိုရှာဖွေနေ။ ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမပြုနိုင်လျှင်ကြီးမားသောအကူအညီဖြစ်သည့်အပြင် ဒါကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် Android အတွက်အကောင်းဆုံးဖိုင်မန်နေဂျာများရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်သင့်ကိုထားရှိပါသည်.
ဤအပလီကေးရှင်းအမျိုးအစားများကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှများပြားလာသည်။ ဗားရှင်းအသစ်အမြောက်အများပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ခြင်းသည်ခက်ခဲနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့စာရင်းကျဉ်းပါပြီ။ အောက်ပါ ကျွန်ုပ်တို့သည် Android အတွက်အကောင်းဆုံးဖိုင်မန်နေဂျာများနှင့်အတူသင့်အားထားရှိပါသည်.
1 ဖိုင်မှတ်တမ်း Explorer ကို
2 ES File ကို Explorer ကိုဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကို
ဖိုင်မှတ်တမ်း Explorer ကို
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်သော Android ထုတ်ကုန်များအတွက်လူသိအများဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါ interface ကိုပစ္စည်းဒီဇိုင်းအပေါ်အခြေခံသည်ကောင်းစွာဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းအပြင်အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား၎င်းကိုအလွန်ပြီးပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှုဖြစ်စေရန်ထပ်ဆင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေးထားသည်။ ဒါ့အပြင် ၎င်းသည်တက်ဘလက်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သောအကောင်းဆုံးမန်နေဂျာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်အလွန်စွယ်စုံဖြစ်ပါတယ်။
La Android အတွက်ဤလျှောက်လွှာကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ ဒါ့အပြင်အတွင်းမှာဝယ်ယူမှုသို့မဟုတ်ကြော်ငြာမရှိပါ။
ရေးသားသူ: Mauricio Togneri
ES File ကို Explorer ကိုဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကို
၎င်းသည် Android သုံးစွဲသူများသိရှိနိုင်သည့်ဖိုင်မန်နေဂျာနောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရှာတွေ့နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ထက်ကား၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထင်ရှားစေသည်၎င်း၏အဓိကရည်မှန်းချက်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည် ဖုန်းဖိုင်များကိုအချိန်တိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့လိုအပ်တဲ့အခါတိုင်းသူတို့ကိုရှာနိုင်အောင် ထို့အပြင်၎င်းတွင်၎င်းကိုပိုမိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ထပ်ဆင့်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာရှိသည်။
၎င်းသည်ဖိုင်များကိုကူးယူရန်၊ ကူးရန်၊ ကူးရန်၊ ဖျက်ရန်၊ မျှဝေရန်သို့မဟုတ်အမည်ပြောင်းရန်ခွင့်ပြုသည်များစွာသောအခြားလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအကြား။ The Android အတွက်ဒီ manager ကို download လုပ်ပါ။ ကြော်ငြာများရှိသော်လည်းအတွင်းပိုင်းတွင် ၀ ယ်ယူမှုများမရှိပါ။
ဤလျှောက်လွှာသည်ဤအမျိုးအစားအတွင်းရှိအရိုးရှင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဒီဇိုင်းအသုံးပြုရန်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေပါသည်။ ဒါကြောင့်သင်ရှာနေတဲ့နေရာကိုဘယ်မှာရှာမလဲဆိုတာအမြဲတမ်းသိပါတယ်။ ဖိုင်တွေကိုအမျိုးအစားအလိုက်ခွဲမယ်။ တစ်ခုခုရှာဖွေရန်အလွန်အဆင်ပြေသောကြောင့်။ ဒါ့အပြင် ဖိုင်များကိုဖုန်းသို့မဟုတ် Google Drive သို့မဟုတ် Dropbox မှစီမံနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အလွန်ထိရောက်ပြီးအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသော option ကို။
La Android အတွက်ဒီဖိုင်မန်နေဂျာကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ ထို့အပြင်အတွင်း၌ ၀ ယ်ယူမှုများသို့မဟုတ်ကြော်ငြာများမရှိပါ။
ရေးသားသူ: App ကို Annie အခြေခံများ
ဤသည် Windows Explorer ၏ Android ထုတ်ကုန်များအတွက်ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့စစ်ဆင်ရေးသည်သင်တို့ကိုအလွန်အံ့သြသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်ဤရွေးချယ်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ပို၍ ရှုပ်ထွေးကြောင်းပြောရမည်။ ဒါကြောင့်အလေ့အကျင့်အနည်းငယ်ကြာပါသည်။ ဒါပေမယ့် ဒါကြောင့်အပိုဆောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုကမ်းလှမ်းတဲ့အလွန်ပြည့်စုံ option ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်များကိုစက်ပစ္စည်း၊ ကွန်ယက်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်တိမ်တိုက်ထဲ၌ကျွန်ုပ်တို့ရှာနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ သင်တက်ဘလက်အတွက်ဖိုင်မန်နေဂျာကိုရှာလျှင်၎င်းသည်ရွေးချယ်စရာကောင်းသည်။
Android အတွက်ဤလျှောက်လွှာကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ အတွင်း၌ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်ကြော်ငြာများကိုတွေ့ရသည်။
ရေးသားသူ: C. Ghisler
စာရင်းကိုဒီ option နဲ့ပိတ်လိုက်တယ် အလွန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်းရှိခြင်းများအတွက်ထွက်ရပ်တည်။ ဒါကသူတို့အာရုံစူးစိုက်မှုတွေအများကြီးပေးဆောင်ထားတဲ့တစ်ခုရှုထောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုအလွန်အဆင်ပြေခြင်းနှင့်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူစေသည်တစ်ခုခု။ နောက်တဖန်သူကကျွန်တော်တို့ကိုအခြေခံအကျဆုံးနှင့်အခြားပိုမိုအဆင့်မြင့်သောနှစ် ဦး စလုံးကွဲပြားခြားနားသောရွေးချယ်စရာများအများကြီးပေးထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကို Google Drive (သို့) Dropbox ကိုသုံးခွင့်ပေးတယ်.
La Android အတွက်ဒီဖိုင်မန်နေဂျာကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ အက်ပ်အတွင်း၌ ၀ ယ်ယူမှုများနှင့်ကြော်ငြာများရှိသော်လည်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Android အတွက်အကောင်းဆုံးဖိုင်မန်နေဂျာများ
ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ "Solid Explorer" ပါ။
၎င်းသည်သင်၏ဖိုင်များအတွက်မိုးတိမ် (Googledrive, Dropbox, Onedrive, Mega စသည်တို့) အတွက်မန်နေဂျာတစ်ယောက်အဖြစ်နှင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားတစ်ခုစီကိုအခြား disk တစ်ခုအဖြစ်ပြသပြီးဖိုင်များနှင့်ဖုန်းအကြားအလွယ်တကူကူးယူနိုင်သည်။
အဆင်မပြေမှုကအခမဲ့မဟုတ်ပေမယ့်သင်အနည်းငယ်ကြည့်လျှင် piratilla ကိုတွေ့လိမ့်မည်။
သတင်းလွှာ - ဒေသပုံပြင်များကိုဖတ်ရန်သင့်အတွက်ဂူဂဲလ်၏အက်ပလီကေးရှင်း
Meizu 15 ၏ပထမပုံရိပ်သည်ကင်မရာနှစ်လုံးနှင့်ကွေးကောက်မျက်နှာပြင်ကိုပြသည်